Sida loo wareego naqshadda cusub ee Semalt oo loo isticmaalo in lagu darajo sare Google
Waxay ku qaadataa 50 milise seconds inay adeegsadayaashu horumariyaan fikradda websaydhkaaga. Isticmaalayaashu waxay raadsadaan muuqaal fudud oo ay ku adeegsadaan bogaggooda. In kasta oo tani ay tahay talo fiican oo loogu talagalay hal dhinac oo websaydhkaaga ah, Semalt ayaa tan ku dabaqay boggeeda cusub.
Bogaga cusub ee Semalt wuxuu raadinayaa inuu isku daro qaab qayaxan, naqshad casri ah oo leh qaab fudud oo akhrin kara. Naqshaddan, Semalt wuxuu sahlay in la fahmo sida ay kuugu heli karaan inaad ugu sarreeyaan Google.
Dib-u-eegis Degdegga ah ee Eray-bixinta SEO
Kahor intaanan aad u fogaan hilibka mowduuca, waxaa lama huraan ah in la yeesho faham guud oo ku saabsan qaar ka mid ah macallimiinta loo baahan yahay. Bartayada ayaa leh hage guud oo ku saabsan SEO haddii aad jeceshahay inaad si qoto dheer u qodoto aasaaska. Sheekadaan, waxaan dul mari doonnaa qeexitaanno aasaasi ah.
SEO waxay u taagan tahay kobcinta Mashiinka Raadinta. Waa geedi socodka adkeynta shabakadaada si sahlan looga raadsado internetka.
AutoSEO waa badeecad ay sii deysay Semalt taas oo loogu talagalay kuwa doonaya inay galaan SEO-ga iyada oo aan lacag badan la gelin.
FullSEO waa nooca sare ee 'AutoSEO' kaas oo xooga saaraya la shaqeynta Khabiirka SEO iyo maamule.
SSL waa muuqaal aamin ah oo ka dhigaya xogta macaamiisha inay ku keydsan yihiin bartaada internetka.
Furayaasha ereyada waa ereyo gaar ah ama weedho ay dadku raadin karaan markay raadinayaan boggaaga.
Darajaynta ayaa ah meeqa booskaaga, ama ereyga muhiimka ah, uu ka muuqdo mashiinka raadinta.
Taraafikada waa tirada dadka soo booqda bartaada.
Fahmitaanka websaydhka cusub ee Semalt
AutoSEO, FullSEO, iyo SSL wali waa badeecada Semalt u adeegsado inay ku riixdo goobtaada. Sida lagu sheegay mareegteena hore ee maaddada, mawduucyadan oo dhan waa alaab la aqoonsan yahay oo leh rikoor la hubo oo guusha. Haddii aad jeceshahay inaad hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan laynka alaabada, fadlan arag qormadii hore.
Bloggan, waxaan diirada saari doonaa sahaminta astaamaha cusub iyo walxaha naqshada ee websaydhka cusub. Semalt wuxuu hirgeliyay qaar ka mid ah muuqaalada cajiibka ah ee u qalma in laga gudbo.
Bogagga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta (SERP)
Hubinta U Gaar Ahaanshaha Bogga
Loogu talagalay Maamulayaasha shabakadaha Google
Falanqaynta Xawaaraha Bogga
Fahmitaanka dashboard-ka cusub ee Semalt
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Dashboard' weli wuxuu leeyahay qaar badan oo ka mid ah miirayaasha filtarrada ee midka hore. Farqiga ugu weyni wuxuu ka yimaadaa isbeddel ku yimaadda interface-ka oo xoojinaya baahiyaha adeegsadaha.
Markaad hoos u rogto, waxaad arki doontaa inta keyword keywords-kaaga ah ee ugu sarreeya 1, 10, 30, iyo 100. Dashboard-kan wuxuu ku siinayaa fikrad ah waxa ugu wanaagsan ee aad ku garaacdo ereygaagu. Waxaad u adeegsan kartaa macluumaadkan inaad ku muujiso ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee la raadinayo.
Waxaad ka heli kartaa in set keywords ah uu wax badan ka tari karo keenida iibka la beddeli karo websaydhkaaga. 'Dashboard' Semalt's SEO ayaa kaa caawin kara inaad ogaato ereyada furaha ah ee keena taraafikada. Marka lagu daro xogta tirada macaamilada ee boggaaga, waxaad ogaan kartaa inaad soo jiidanayso nooca khaldan ee taraafikada.
Fahamka Bogaga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta (SERP)
Bogaga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta ayaa ku siinaya macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida boggaaga shabakadda uu uga dhex baxo raadinta. Waxay ku siineysaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan waxa ereyada muhiimka ah ay u kala sarreeyaan iyo sida ay ugu hogaaminayaan boggaaga. Waxay kaloo bixisaa macluumaad aan laga helin bogag kale oo badan oo SEO ah: macluumaad ku saabsan tartamayaasha.
Xitaa waxaad go'aansan kartaa inaad u kala dhig dhigto isbarbardhigaan mashiinka raadinta aad doorbiday. Google waa mashiinka koowaad ee raadinta adduunka, laakiin haddii aad ka hesho dhagaystayaal suuragal ah adoo adeegsanaya Yahoo ama Bing, waxaad ka heli kartaa erey-bixinno gaar ah oo aad si fiican ugaga qiimeyn karto halkaas. Waxaad u baahan kartaa inaad abuurto olole doonaya inuu ku garaaco tartamayaashaada dhammaan seddexda matoor.
Markay tixgalineyso SEO, Semalt wuxuu fahmay in xogtu wax walba tahay. Shirkado badan ayaa kaa caawin doona sameynta mashaariicda Google AdWords, laakiin tani waa xalka muddada-gaaban. Xayeysiintu ma hagaajin doonto raadinta goobtaada waqti ka dib, laakiin waxay ku siinaysaa kor u qaadis ku meel gaadh ah oo ku dhammaata lacagta. Bogagga shabakadda ee lagu dhisay SEO maanka ayaa si dabiici ah u garaacay dusha sare ee bogaggan waxayna sii wadi doonaan inay heer sare ka galaan dayactirka joogtada ah.
Waa maxay Baaritaan U Gaar ah?
SEO waa wax inta badan kaaga baahan inaad noqoto mid hal abuur leh isla markaana sidoo kale la mid ah kuwa kula tartamaya ee mudnaanta u leh ereyada muhiimka ah.
Qorayaasha xirfadleyaasha ah ee 'Semalt' ee SEO-ga ayaa aqoonsan arrintan isla markaana adiga ku siinaya erey-bixinno gaar ah oo darajayn doona halka sidoo kale la siinayo qoraayaasha qori kara waxyaabaha u gaarka ah. SEO waa isku dheelitirnaan xasaasi ah, laakiin Semalt horeba wuxuu u lahaa kiisas ka hadlaya guushiisa.
Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad ahayd qoraa kahadlaya waxyaabaha madaxbanaan oo hada ganacsiga galaya, laakiin waxaad ubaahantahay caawimaad yar si aad boggaaga uhesho. Hoos waxaa ku yaal farriin kooban oo ka socota boggaaga oo lagu sawiray aag u gooni ah bogga hubinta bogga cusub ee Semalt.
Waxaad ogaan doontaa inay jiraan waxyaabo badan oo muuqaalka ka badan oo ku yaal bogga. Kadib markay ku socodsiiso hubinta tusmada, waxay aqoonsatay in qaybahani ay ku yaalliin goobo kale oo shabakada ah. Sidaas darteed, gaar ahaanta boggan ayaa ah dhibcuhu mid ahaanta 13 boqolkiiba.
Mashiinka raadinta wuxuu u badan yahay inuu qiimeeyo waxa ku jira haddii loo arko inuu yahay awood ama il aamin ah. Hal dariiqo oo mashiinka baaristu ku go'aamiyo tan waa iyada oo loo maro midaynta maaddada. In kasta oo SEO ay ka go'an tahay raadinta erey-bixinno muhiim ah, oo goobo badan ay wadaagi karaan, degel aan awood u lahayn inuu ka dhex istaago dadka ayaa sii wadaya inuu si xumo u qiimeeyo.
Semalt waa shirkad taas og. Anaga oo ku darinna annaga adeegyadeena (SERP), waxaan si wax ku ool ah u go'aansan karnaa haddii istiraatiijiyad is beddel ay muhiim tahay iyo in kale. Waxaad uqalami kartaa oo kugu filan inaad ku meelayso 100ka ugu sareysa iyadoo tixgelin xadidan la leh tan. Si kastaba ha noqotee, tobanka sare ayaa u baahan doona meheraddaada inay kala soocaan bartilmaameedsiga ereyada furaha gaarka ah ee ay la socdaan waxyaabaha gaarka u ah.
Raadinta Webmasters Google ee leh Semalt
Adigoo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn adduunka, waxaa laga yaabaa inaad horeyba uga warheysay in Google uu leeyahay aalado badan oo lagula socdo waxqabadka. Semalt wuxuu raadinayaa inuu ku kabo waxqabadkaas isagoo adeegsanaya kooxdeeda khubarada SEO iyo maareeyayaasha si kor loogu qaado tan. Si kastaba ha noqotee, kuwa horeyba ugu hoos jiray barnaamijka mulkiilaha webka, Semalt adiga ayaa sidoo kale xal u leh adiga sidoo kale.
Adigoo kala soo dejinaya faylka HTML boggooda oo aad geliso websaydhkaaga, Semalt wuxuu raadraaci karaa macluumaad aad u faahfaahsan. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad HTML ku dhajiso bartaada sidoo kale. Haddii aad wax jahwareer ah ka qabtid hanaankan, xor u tahay inaad la xiriirto emaylka taageerada macaamiisha. Haddii aad doorbideyso kanaal kale, macluumaadka xiriirkooda wuxuu ku yaal qeybta hoose ee bog kasta.
Sidoo kale, gelinta xogta si toos ah Semalt waxay yareysaa tirada goobaha aad ku ilaaliso xogtaada. Tan ka hor, waxaa laga yaabaa inaad lahaato hal boggaga boggaaga, hal guddi oo loogu talagalay falanqaynta ereyga, iyo mid kale oo loogu talagalay xogta mareegta. Iyadoo la adeegsanayo Semalt, waxaas oo dhami waxay ku yaalliin hal goob.
Falanqaynta Xawaaraha Bogga iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto SEO-gaaga
Markay tahay SEO, uma badna inaad ka fikirto xawaaraha boggaaga oo leh saameyn saameyn weyn leh. Si kastaba ha noqotee, heerka rarka ee boggaagu wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn SEO.
Furegu wuxuu ku jiraa erayga "kobcinta", goob sifiican loo wanaajiyey ayaa ah mid aan lahayn xiriirro jabay, looxyo, iyo xamuul degdeg ah. Marka kooxda Semalt ee khabiirada SEO ay marin u yeeshaan websaydhka, falanqeyntooda ayaa daaha ka qaadi doonta qodobbadan jabay isla markaana hubin doona kaliya macluumaadka la xiriira ee macaamiisha inay xallinayaan
Marka la eego tirakoobkii hore ee dadka ku dhaca 50-milayn digniin feejignaan, waa muhiim in la helo bog deg deg ah oo si fudud loo aqrin karo. Hoos waxaa ku yaal mootada aad isticmaali doonto si aad ula socoto xawaarahaaga.
Sidaad arki karto, Tusaalaha bogga aan isticmaaleyno waa mid aad u fiican. Waxay leedahay labo qalad oo yaryar oo aad raadraaci karto, laakiin kuwaasi ayaa laga yaabaa inay u weecdaan dhanka iibka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, dashboard-kan wuxuu gaar u yahay nooca desktop-ka. Haddii aan eegno nooca mobilada ee boggan internetka, waxay daaha ka qaadi doontaa wax ka duwan.
Iyada oo boqolkiiba 81 dadka Mareykanka ah ee isticmaala taleefannada casriga, waa inaad garataa baahida loo qabo kor u qaadista mobilada. Tusaalaha kore wuxuu sheegayaa in degelkani uu dhexdhexaad ka yahay tartamayaasha. Si kastaba ha noqotee, Semalt wuxuu shaqeeyaa kaas oo kugu qaadaya wixii ka sarreeya celcelis ahaan.
Sidee ayay dashboard-ka cusub ee Semalt uu iga caawin karaa inaan gaaro meesha ugu sarreysa ee Google?
Qaddarka xogta aad cuneyso maalin kasta waa mid xad dhaaf ah. Natiijo ahaan, waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn in lala socdo xajmiga maalinlaha ah. Markaad iskudarto howlahaaga caadiga ah sida milkiilha iyo maareynta degel, labada ayaa midba midka kale ka nacaa.
Geedi socodka Semalt waa hab fududaynta habka maareynta goobta qaab sidan oo aad dareenkaaga ugu celin karto halka ay ugu baahan tahay: ganacsigaaga. Iyadoo ay wehelinayaan koox khubaro ah oo Semalt ah oo ku faraxsan inay kugu hagaan SEO, waxaad ka heli doontaa naftaada mid ka mid ah kuwa ugu sareeya Google.
'Dashboard' waa natiijada Semalt ee hanaanka loo aqoonsado waxa macaamilka doonayo. Nidaam sahlan, waxaan rabnaa inaan hubino inaadan kaliya helin cusbooneysiin joogto ah oo ku saabsan maaraynta ololahaaga SEO, laakiin waad fahantay oo aad aqoonsan tahay kororka ay ololahan ku keenayaan ganacsigaaga.
Haddii aad tahay milkiile ganacsi oo aad jeceshahay inaad ku lug yeelato taraafikada, Semalt wuxuu diyaar u yahay inuu kuu geeyo meel aad ku soo jiidan karto taraafikada, ku mashquusho macaamiisha, oo aad u kordhiso iibka.